Isobho sekhaphetshu, Ukutya ukunciphisa umzimba Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
1 Yintoni ukutya kwesuphu yeklabishi?
2 Kukuthini ukutya kwesuphu yeklabishi?
2.1 Imigaqo yosuku ngalunye lokutya kwesuphu yeklabishi
3 Ngaba ukutya kwesuphu yeklabishi kukwenza unciphise umzimba?
5 Iresiphi yesobho sekhaphetshu
Yintoni ukutya kwesuphu yeklabishi?
Ukutya isuphu yeklabishi kukutya okunciphisa umzimba okwexeshana. Njengoko igama lisitsho, kubandakanya ukutya izixa ezikhulu zesuphu yemifuno kunye nokunye ukutya.
Abaxhasi besi sicwangciso sokutya bathi sinokukunceda ukuba ulahle ukuya kuthi ga kwiikhilogrem eziyi-4,5 ngeveki enye, kodwa iingcali ezininzi zezempilo zilumkisa ukuba ukutya akunampilo kwaye iziphumo zazo azizinzanga- Oko kukuthi, wakuba uyekile ukutya kangange veki, kusenokwenzeka ukuba uphinde ufumane ubunzima obulahlekileyo.
Kukuthini ukutya kwesuphu yeklabishi?
Kwiveki, isidlo sisuselwe phantse kuyo yonke into ngaphandle kwesuphu yekhaphetshu eyenziwe ekhaya. Suku ngalunye, kukhutshwa enye okanye ezimbini zokutya, ezinje ngobisi olunamafutha, iziqhamo, okanye imifuno. Ukutya akunakudlula ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe.
Ukongeza isuphu, okunye ukutya okuneekhalori ezisezantsi kuvunyelwe ukutyiwa yonke imihla. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ungenzi ezinye izinto endaweni yazo kwaye usele kuphela amanzi okanye ezinye iziselo ezingezizo ezekhalori, ezinje ngeti engenaswekile.
Imigaqo yosuku ngalunye lokutya kwesuphu yeklabishi
Usuku lwe-1: Unlimited ikhaphetshu kunye nesuphu yeziqhamo, kodwa akukho bhanana.
Usuku lwe-2: Isuphu kunye nemifuno. Gxila kwimifuno eluhlaza okanye ephekiweyo. Gwema i-ertyisi, umbona kunye neembotyi. Unokutya neetapile ezibiliswe ngebhotolo okanye ngeoyile.
Usuku lwe-3: Zininzi iziqhamo kunye nemifuno njengoko ufuna, kunye nesuphu. Nangona kunjalo, akukho zitapile zibilisiweyo okanye iibhanana.
Usuku lwe-4: Iibhanana ezingenamkhawulo, ubisi olunamafutha, kunye nesuphu yeklabishi.
Usuku lwe-5: I-280 ukuya kuma-567 iigrem zenyama, onokuyifaka endaweni yenkukhu okanye intlanzi. Ukufikelela kwiitumato ezintsha ezintandathu nazo ziyavunyelwa. Sela ubuncinci iiglasi ezi-6 ukuya kwezi-8 zamanzi.
Usuku lwe-6: Isuphu, inyama kunye nemifuno. Unokufaka endaweni yentlanzi eyosiweyo yenyama ukuba khange uyenze kusuku olungaphambi kwalolo. Gxila kumagqabi aluhlaza. Akukho zitapile zibilisiweyo.
Usuku lwe-7: Unokuba nemifuno engasikelwanga mda, irayisi emdaka, kunye nejusi yeziqhamo, kodwa akukho shukela longezelelweyo.
Ukutya akufuneki kuqhubeke ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe ngexesha kwaye kuyacetyiswa ukuba ulinde ubuncinci iiveki ezimbini ngaphambi kokuba uqalise kwakhona.
Ngaba ukutya kwesuphu yeklabishi kukwenza unciphise umzimba?
Ukutya isuphu yeklabishi akuzange kufundwe, ngenxa yoko akunakwenzeka ukuba uqinisekise ukusebenza kwayo. Nangona kunjalo, kuba iphantsi kakhulu kwiikhalori, iya kuthi ibangele ukunciphisa umzimba.
Nangona ukutya kwesuphu yeklabishi kunokukunceda ukunciphisa umzimba, uninzi lobu bunzima buya kubuya kwakamsinya nje xa ubuhlile.
Enye yeengxaki eziphambili kukutya kukuba inokulandelwa kuphela iveki, engonelanga ukunciphisa umzimba.
Kwiveki yokuqala yokutya okuphantsi kwekhalori, yi-34% kuphela yesisindo esilahlekileyo esityebileyo. Esinye isibini kwisithathu sivela ekuphulukaneni nobunzima bamanzi kunye nobunzima bemisipha.
Enye ingxaki enkulu yokutya isuphu yeklabishi kukuswela izondlo.
Ukutya isuphu yeklabishi kuneendlela ezimbalwa zokutya ezinokuswela iivithamini kunye neeminerals kwaye aziboneleli ngowona mthombo weprotheni kwiintsuku ezininzi.
Ngaphandle kwesixa esikhulu seprotein, uya kuzabalaza ukunqanda ukulahleka kwemisipha ngexesha lokutya.
Iresiphi yesobho sekhaphetshu
Ipakethi e-1 yamakhowa
1-2 i-bouillon cubes (ukhetho)
Iikomityi ezi-6 ukuya kwezi-8 zamanzi okanye ijusi yemifuno elungiselelwe
Sika yonke imifuno ibe ziityhubhu. Kwi-skillet enkulu, gcoba i-anyanisi kwisixa esincinci seoli.
Emva koko yongeza imifuno eseleyo kwaye ugubungele ngamanzi okanye ijusi yemifuno kwaye ungeze i-bouillon cubes okanye ezinye iziqholo ukuba uyafuna.
Yizisa kwimathumba kwaye unciphise ubushushu obuphakathi. Bamba de imifuno ithambe, malunga nemizuzu engama-30 ukuya kwengama-45.
Isuphu ivumelekile ukuba inongwe ngetyuwa, ipepile, isosi eshushu, imifuno okanye iziqholo. Kuyenzeka ukuba wongeze eminye imifuno engeyiyo yesitatshi enje ngesipinatshi.